Tongasoa eto Cambridge ry (avy any) Havana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Jolay 2019 8:48 GMT
Ny herinandro lasa teo, tafaraka tao Cambridge Massachusetts nandritra ny fivorian'ny GV ny tenako sy Firuzeh Shokooh Valle, Ellery Biddle ary Elaine Diaz, ka tany an-tranon'i Elaine izahay no nisakafo, niaraka tamin'ny arroz con frijoles, yucca nendasina, kisoa sy akondrolahy, no sady mipetrapetraka ao amin'ny tokontaniny mangingina sy maitso mavana. Elaine no mpanao gazety sady bilaogera Kiobana voalohany teo amin'ny tantara ka nahazo ny Vatsim-pianarana Nieman tao amin'ny Oniversiten'i Harvard, ary efa herinandro vitsy izy izay no tao Cambridge. Niala an'i San Francisco nifindra teto ihany koa i Ellery, nahazo vatsim-pianarana niaraka tamiko ao amin'ny Foibe Berkman. Raha efa nandany fotoana teto taloha aza i Ellery, dia fiovana lehibe kokoa ho an'i Elaine, avy any Havana izany sy mizatra tanàna vaovao sy ny kolontsaina vaovao. Raha milaza izy fa fanamby izany, dia efa tafapetraka tao amin'ny trano mahafinaritra iray izy, sy efa nahita tsena teo an-toerana miaraka amin'ny fantina tsara indrindra amin'ny vokatra Kiobàna, niditra lalina tamin'ny fifantenany ny fianarana sy ny fampianarana izy, ary angamba ny tena zava-dehibe indrindra, dia vetivety dia lasa mpankafy ny Boston Red Sox izy. Ho an'ny fomba fijerin'i Elaine momba an'i Kiobà indray, dia tsidiho ity resadresaka teo aminy sy i Ellery tamin'ny taona lasa ity, na ao amin'ny horirantava New York Times tamin'ny taona lasa.
Efa an-taonany maro i Firuzeh no nonina tao Boston, ary angamba efa lasa fototra ho an'ny ekipantsika Amerika Latina izany ankehitriny. Raha mandalo ao amin'ny faritra ianao – dia tongava miarahaba, na tongava mitsidika anay ao amin'ny Berkman Center, ao amin'ny Nieman Foundation, na ny MIT Center for Civic Media, izay ahitanao an'i Ethan Zuckerman ihany koa.